घरपालुवा कुकुरहरूले अब ‘डगफोन’ प्रविधिबाट मालिकलाई कल गर्न सक्ने « News24 : Premium News Channel
एजेन्सी । मानिसहरुले जस्तै घरपालुवा कुकुरले समेत अब ‘डगफोन’ प्रविधिबाट मालिकलाई कल गर्न सक्ने भएका छन् । पछिल्लो समय मानिसहरुमा स्मार्टफोन स्क्रिनहरूको सहयोगमा साथीको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गरेको अवस्थामा हाम्रा घरपालुवा जनावरहरूसँग त्यो विलासिता छैन। वा तिनीहरूले … अहिलेसम्म गरेनन् !
डगफोन एक नरम बल हो जसले ल्यापटपमा भिडियो कल सुरु गर्नका लागि संकेतहरू पठाउँछ। कुकुरका मालिक अर्थात अभिभावकले कल लिन, वा ह्याङ्ग अप गर्न छनौट गर्न सक्नेछन् ।
थप रूपमा, घरपालुवा जनावर आमाबाबुले उनीहरूको कुकुरहरूलाई पनि कल गर्न सक्छन्, जसले कल उठाउनको लागि मात्र बल सार्नुपर्दछ।
कुकुरहरूलाई प्रविधिसँग लैजाने
द गार्डियनसँगको कुराकानीमा, ग्लास्गो विश्वविद्यालयका डगफोनका निर्माता डा. इल्याना हिरस्कीज-डगलसले भनिन्कि, ‘कुकुरहरूले प्रविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छन्’ भनेर देखाउँछ, जबकि मानिसले कुकुर र अन्य घरपालुवा जनावरहरूका लागि धेरै राम्रोसँग प्रविधि निर्माण गर्न सक्छ।
हिरिस्कज डगलसका अनुसार, नियन्त्रणको भावना दिँदा घरपालुवा कुकुरहरूको कल्याणमा फाइदा हुन्छ। कम्प्युटर(मानव अन्तरक्रियामा कम्प्युटिङ मेसिनरीका लागि संघको कार्यवाहीमा प्रकाशित, अध्ययनले उत्पादन कसरी विकसित भयो भनेर हाइलाइट गर्दछ।
सिर्जनाकर्ताहरू सही मात्रामा संवेदनशीलतासँग लैजान चाहन्थे, जसको लागि उनीहरूले यसलाई १६ दिनभन्दा बढी समयसम्म परीक्षण गरे। हिरस्कीज-डगलसले उनको नौ वर्षीय ल्याब्राडोर ज्याकमा बलको परीक्षण गरेका थिए।